Kamera Uyezve, iko kushanda kwevhiki | IPhone nhau
Ranga riri svondo zvakare, zvinoreva kuti tatova neimwe mahara maapps kwemazuva manomwe anotevera. Ino nguva, iyo app yevhiki iri Kamera Uyezve . kugadzirisa mifananidzo usati waigovana.
Izvo zvinogona kusiyanisa Camera Plus kubva kune zvimwe zvinoshandiswa zverudzi urwu ndizvo zvavakatumidza kuti AirSnap, sarudzo ichatibvumidza kushandisa chechipiri kifaa kuita mapikicha nekure kure. Pfungwa ndeyekuti, semuenzaniso, isu tinoisa iPhone patripodhi, isu tiri toga kana takaperekedza uye tinotora pikicha kubva kuApple Watch kana imwe iPhone, izvo zvisina kushata.
Camera Plus: kure kamera, mafirita nemifananidzo
Kune zvese zvimwe zvinhu, Camera Plus chishandiso chakafanana chaizvo nemamwe makamera ekushandisa. Kana tave kuzotora pikicha, kana tikatsvedza kana kudzika, tinogona kusarudza pakati pemaitiro akajairwa, iyo macro mode kana nzira iri kure, iyo mune dzidziso inogadzira mamiriro akakwana emamiriro ese ezvinhu. Pakati pesarudzo dzinowanikwa kamera, isu tine:
Bhatani rakakura, iyo ichatibvumidza isu kutora pikicha nekubata chero kupi pachiratidziri.
Kudzikamisa, iyo ichaedza kugadzirisa mafambiro emaoko edu.
Bursts, chinhu chakanakira kuve nesarudzo, asi kamera yemuno yeiyo iPhone 5s kana gare gare ine sarudzo iyi. Chero zvazvingaitika, zvinogona kubatsira kune iPhone 5 uye zvisati zvaitika.
Nguva. Kana isu tisina chimwe chishandiso chekushandisa AirSnap, tinogona kumisikidza nguva inomirira usati watora mufananidzo.
Kunyangwe ndichifanira kubvuma kuti hachisi chikumbiro chinondibata, zviri nani kurodha Kamera Plus izvozvi zvazviri mahara kwevhiki uye ubatanidze kune yedu Apple ID. Ndiani anoziva, pamwe ndichatenga Apple Watch mune ramangwana uye zvichave zvakanaka kwandiri kuti ndamboibata izvozvi.
Kamera Uyezve: Simbisa Iyo Nguva3,49 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kamera Uyezve, kutora mapikicha ari kure neapp yevhiki
ProtonMail inogadziridzwa ichiwedzera rutsigiro rweTouch ID